किन जान पाएनन् भाषा पास गरेका १२ हजार नेपाली काेरिया , यस्तो छ कारण ! « Bagmati Online
किन जान पाएनन् भाषा पास गरेका १२ हजार नेपाली काेरिया , यस्तो छ कारण !
काठमाडौँ — कालीकोट, रास्कोट–१ का २५ वर्षीय अनन्त आचार्यले ५ वर्षको मिहिनेतपछि सन् २०१९ मा दक्षिण कोरिया जान नाम निकाले । कडा प्रतिस्पर्धा हुने रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) को भाषा र सीप परीक्षा उत्तीर्ण गरेपछि उनी फुरुङ्ग थिए । उड्ने दिन कुर्न थाले । तर दुई वर्ष हुँदा पनि न कोरिया जान पाएका छन्, न कहिले जाने टुंगो नै छ । ‘अत्यास नै लागिसक्यो, जानै पो नपाइने हो कि !’ उनले भने ।
सुरूमा नेपालले नपठाउँदा र पछि कोरियाले नलिँदा भाषा परीक्षामा उत्तीर्ण १० हजार ५ सय ५ र ‘प्रतिबद्ध कामदार’ करिब २ हजार अलपत्र परेका हुन्
कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि लकडाउन जारी गर्नुभन्दा एक महिनाअगाडि गत वर्ष फागुन २१ देखि नै नेपालले एकतर्फी रूपमा कामदार पठाउने प्रक्रिया स्थगन गरेको थियो । त्यतिबेला कोरियामा कोरोना भाइरस संक्रमण तीव्र गतिमा फैलिरहेको थियो । नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या उच्च देखिन थालेपछि गत सेप्टेम्बरतिर कोरियाले नेपाललाई अति संवेदनशील मुलुकको सूचीमा राखेको छ । ‘खाडीका मुख्य गन्तव्य देशले नेपालबाट कामदार लगिरहेका छन् । कोरियाले पनि अन्य मुलुकबाट कामदार लगेकै छ । हाम्रो सरकारले कोरियाली सरकारसँग कूटनीतिक पहल र उच्च तहमा संवाद नगर्दा रोजगार अनिश्चित बन्यो,’ कोरिया जान नपाएका कामदारहरूको संघर्ष समितिका अध्यक्ष अजय सोडारीले भने । नेपालको पछिल्लो अवस्थाबारे कोरियालाई अवगत गराए संवेदनशीलको सूचीबाट हट्ने उनको विश्वास छ ।
कोरिया गएपछि कामदारले ४ वर्ष १० महिनासम्म काम गर्न पाउँछन् । उनीहरूको कमाइ भने न्यूनतम १ लाख ६० हजार र ‘ओभरटाइम’ समेत गरी अधिकतम ३ लाख रुपैयाँसम्म हुन्छ । एउटै कम्पनीमा करिब ५ वर्ष काम गरेर फर्केकालाई उही रोजगारदाताले चाहे तीन महिनापछि प्रतिबद्ध कामदारका रूपमा फेरि लैजान सक्छन् । त्यसका लागि परीक्षालगायतका प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ । प्रतिबद्ध कामदारले पनि ४ वर्ष १० महिना नै काम गर्न चाहन्छन् ।
२०१७ को भाषा परीक्षामा उत्तीर्ण भएका कोहलपुर, बाँकेका सुदीप शाही अझै कोरिया उड्ने दिन कुरेर बसेका छन् । ‘भाषा परीक्षामा उत्तीर्ण भएको एक वर्षपछि मेरो नाम रोस्टरमा चढ्यो । त्यसको म्याद २०२० मै सकियो । अब के हुन्छ, थाहा छैन,’ उनले भने, ‘अब फेरि परीक्षामा सहभागी हुनुपर्ने भयो भने मेरो समय बर्बाद हुन्छ । पैसा डुब्छ । मेरो करिअर नै पछाडि पर्छ ।’ सामान्यतया रोस्टरमा नाम चढेको दुई वर्षसम्म म्याद हुन्छ । कोरोनाकालमै म्याद सकिएका पनि थुप्रै छन् । रोस्टरको समय सकिएपछि के हुन्छ भनेर आफूहरूले सोधेको तर औपचारिक सूचना आइनसकेको कोरियाका लागि श्रम काउन्सिलर रमा भट्टराईले कान्तिपुरसँग बताइन् ।
हाल कोरियामा ३१ हजार ४ सय ३१ जना नेपाली कार्यरत छन् । नयाँ कामदार जान नपाउँदा नेपालीको संख्या घट्दै गएको छ । श्रम काउन्सिलर भट्टराईका अनुसार तत्काल कोरियाको रोजगारी तत्काल नियमित हुने अवस्था छैन । कोरियामा सन् १९९० को दशकमा नेपाली भिजिट भिसामा गएर काम गर्न थालेका थिए । सन् १९९४ देखि २००४ सम्म प्रशिक्षार्थी कामदारका रूपमा जान थाले । नेपाल र कोरियाबीच समझदारी भएपछि ईपीएसमार्फत सन् २००८ मा कोरियाले अदक्ष कामदारका रूपमा नेपालीलाई लैजान थालेको हो । कोरियामा रहेका करिब ३१ हजार कामदारले प्रत्येक वर्ष झन्डै ६३ अर्ब रुपैयाँ बचत गर्ने गरेका छन् । त्यसको करिब ३१ प्रतिशतमात्रै सरकारको आधिकारिक प्रणालीमार्फत नेपालमा रेमिट्यान्स आउँछ । गत वर्ष ४३ अर्ब वैधानिक रूपमा रेमिट्यान्स आएको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।